သင်ဒီမှာပါ: Home / ကြီးထွားလာ Solutions / အဆိုပါညံ့ဖျင်းသည် Hydroponics - အဘယ်သူမျှမလျှပ်စစ်မီး & ဘယ်သူမျှမကညှစ်ထုတ်လိုက်
ဤတွင်နောက်တဖန်အခြား ရေရှည်တည်တံ့မဟုတျကွောငျးကြီးထွားလာဖြေရှင်းချက်! Why? Because this gardening system uses chemicals! As the editor should I ditch this solution? The answer isaclear loud NO! Why? Because it is perfectly in line with my mission: collecting solutions from around the world to heal, improve and fix our Planet Earth!
ဒီစနစ်တစ်လမ်းထဲမှာ, တစ်အများကြီးတိုးတက်ဗားရှင်းဖြစ်ပါတယ် ကိုကာကိုလာ Cap တဦးတည်း!
1 အခွအေနေ - အဘယ်အရာကိုမျှမဖြစ်မီစိုက်ပျိုးခဲ့အဘယ်မှာတိုးတက်ကြီးပွားစေရန်
2 စိန်ခေါ်မှု - နီးပါးဘယ်နေရာမှာမဆိုတစ်စုံတစ်ရာကြီးထွားလာ
3 ဖြေရှင်းချက် - သင်ဤမေးခွန်းများကိုမဆိုရန် "Yes" ကိုဖြေကြားလျှင်, Mittleider Method ကိုသငျသညျအဘို့ဖြစ်၏
3.1 ကိုးကား - ထို Mittleider Method ကို
3.2 ဗီဒီယိုကို - အ Mittleider ဥယျာဉ်စနစ်
အခွအေနေ - အဘယ်အရာကိုမျှမဖြစ်မီစိုက်ပျိုးခဲ့အဘယ်မှာတိုးတက်ကြီးပွားစေရန်
ဘာမျှမ "ဒီမှာ" ကြီးထွား!
သငျသညျဟင်းသီးဟင်းရွက်, များစွာသောသင်တို့ရှေ့မှကြိုးစားခဲ့ဖူးက "" ကြီးထွား can't
စိန်ခေါ်မှု - နီးပါးဘယ်နေရာမှာမဆိုတစ်စုံတစ်ရာကြီးထွားလာ
သင် ... လုပ်ချင်ပါသလား:
သာရိုးရှင်းတဲ့ဥယျာဉ် tools များနှင့်အတူဥယျာဉ်တော် (ဒါကြောင့်သင်စျေးကြီးပစ္စည်းကိရိယာများပိုမိုလာရောက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံရန်အတွက်ရန်မလိုအပ်ပါလိမ့်မယ်)?
ကြှနျတေျာ့အပင်သူတို့အကောင်းဆုံးတိုးတက်မှုနှုန်း (ငါ့အကိုမြေဆီလွှာများကဲ့သို့သောအရာကိုအဘယ်သူမျှမကိစ္စ) အတွက်လိုအပ်သည့်အာဟာရများလာပြီဖြစ်ကြောင်းသေချာအောင်?
ဖြေရှင်းချက် - သင်ဤမေးခွန်းများကိုမဆိုရန် "Yes" ကိုဖြေကြားလျှင်, Mittleider Method ကိုသငျသညျအဘို့ဖြစ်၏
27 ကွဲပြားခြားနားသောနိုင်ငံများရှိမိသားစုဥယျာဉ်ကို-size ကိုစိုက်ပျိုးရေးသင်တန်းနှင့်အစီအစဉ်ကိုဖှံ့ဖွိုးတိုးတပို့ချစဉ်ဒေါက်တာယာကုပ်အမျိုးကို R. Mittleider, ကမ္ဘာကျော်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာစိုက်ပျိုးရေးအတိုင်ပင်ခံ, ဥယျာဉ်၏ဤနည်းလမ်းကိုတီထွင်
အဆိုပါ Mittleider Method ကိုလေ့လာမှုနှင့်ဥယျာဉ်အတှေ့အကွုံ 55 နှစ်ပေါင်းအပေါ်အခြေခံသည်
ဒါကြောင့် "ဆင်းရဲသား၏ hydroponic system ကို" ဟုခေါ်နှင့်အကောင်းဆုံးစီးပွားဖြစ်စိုက်ပျိုးသူများအနေဖြင့်စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများနှင့်လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများကိုအသုံးပြုသည်, ဒါပေမယ့်အရွယ်နဲ့မိသားစုဥယျာဉ်မှူးမှအဆင်ပြေအောင်ခဲ့ရဲ့
က5နှင့်ပင် 10 ကြိမ်ရိုးရာနည်းလမ်းများထုတ်လုပ်ရန်ဟင်းသီးဟင်းရွက်များ၏အရေအတွက်သလောက်ထုတ်လုပ်အလွန်အမင်း intensive ဖြစ်တယ်
အများစုမှာမြေဆီလွှာများသဘာဝကျကျအပင်များကလိုအပ်အခြား 13 ဒြပ်စင် (ဓာတ်သတ္တုအာဟာရ) ဆံ့, ဒါပေမယ့် leaching ၏နှစ်ပေါင်းထောင်ပေါင်းများစွာ၏နှင့်သီးနှံဖယ်ရှားရေးအကြီးအကျယ်အသုံးမပြုနိုင် left ရဲ့အဘယ်အရာကိုလုပ်, ရေတွင်ပျော်ဝင်နေသောဒြပ်ပေါင်းများအများစုဖယ်ရှားပါပြီ။ အဆိုပါ Mittleider Method ကိုကိုမြေဆီလွှာ-based ဥယျာဉ်နှင့် hydroponic ဥယျာဉ်ရဲ့အကောင်းဆုံး features တွေပေါင်းစပ်, ဒါပေမယ့် hydroponic စရိတ်မပါဘဲ!
တိုက်ခန်းဟင်းလင်းပြင်တစ်မြို့ခြံတစ်တိုင်းပြည်တွေအများကြီး, ဒါမှမဟုတ်တစ်ဦးလယ်ယာ: ဒါဟာ guesswork ဖယ်ရှားခြင်းနှင့်ဘယ်နေရာမှာမဆိုအောင်မြင်မှုသေချာတဲ့ပြီးပြည့်စုံသော, လွယ်ကူသော-to-နောက်ဆက်တွဲအစီအစဉ်ဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါနည်းလမ်းကိုအာကာသ, အချိန်နှင့်အရင်းအမြစ်များကိုအများဆုံးအသုံးချအပေါ်အခြေခံသည်။ အပင်အတူတူနီးစပ်ကြောင့်သီးနှံများကိုဒါပေမယ့်ဘယ်သူမျှမကအထူးကိရိယာများနှင့်အတူ, (hydroponics ကဲ့သို့) ကသဘာဝဓာတ်သတ္တုအာဟာရဖြည့်စွက်အစာကျွေးခြင်းဖြင့်မွေးမြူ, ကြီးမားတဲ့ဖြစ်ကြသည်။
ဒါ့အပြင် hydroponics မတူပဲ, အ Mittleider Method ကိုကို (ဆင်းရဲသားများအတွက် hydroponics) စက်ရုံကြီးထွားဖို့မရှိမဖြစ်မဟုတ်နေချိန်မှာပင်များ, သေးအမည်မသိသို့မဟုတ်ကြောင့်အာဟာရများအတွက်သဘာဝမြေဆီလွှာကိုမှ access ကိုပေးသည်, လူ့အာဟာရအတွက်အသုံးဝင်ပါသည်။ သငျသညျကိုမြေဆီလွှာ-ကုတင်ဖြစ်စေအတွက်ကောက်ပဲသီးနှံများကိုပြုစုပျိုးထောင်အားဖြင့် Mittleider Method ကိုအသုံးပြုသို့မဟုတ်-box များကိုကြီးထွားနိုင်ပါတယ်။
ကိုးကား - ထို Mittleider Method ကို
အဆိုပါ Mittleider ဥယျာဉ် Method ကို - အညံ့ဖျင်းသောလူသား Hydroponics စနစ် – no shame affiliate link here!
ဗီဒီယိုကို - အ Mittleider ဥယျာဉ်စနစ်